सरकारले भन्योः सडक विस्तारमा अर्बौं मुआब्जा दिन सक्दैनौं | News & Tech..
News & Tech..
Probably The Best & Cheap Hosting
सरकारले भन्योः सडक विस्तारमा अर्बौं मुआब्जा दिन सक्दैनौं
August 8, 2018 September 19, 2018 - by admin - LeaveaComment
२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अर्बौं मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुभन्दा फैसला पुनरावलोनका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
सरकार आफैं मुद्दामामिलामा जाने भएपछि कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तार थप प्रभावित हुने भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । कलंकी नागढुंगा सडकमा वार्तामार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको अदालतको ठहर छ ।
२ असोज २०७४ मै भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही समय अघि मात्र आएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने सरकारको निष्कर्ष छ । अर्बौं क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न नसकिने भएकाले काम नै रोकेर भ्याकेटमा जान लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
अदालतको फैसलाअनुरुप क्षतिपूर्ति दिँदा खराब नजीर बस्ने र त्यसले अन्य सडक विस्तार र राजमार्गको सीमानाबारे समेत अन्योल उत्पन्न हुने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
अहिले विस्तार भइरहेका सडकहरूमा मात्रै सरकारले करिब ५० अर्ब मुआब्जा तिर्नुपर्ने सडकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्विचार होस् भनेर निवेदन दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सडक ऐन २०३१ अनुसार पुनरावेदन गर्ने सकिने आधारहरु हामीसँग छन् । पर्याप्त आधार लिएर यो प्रक्रियामा जाँदैछौं ।’
किन पुनरावलोकनमा जाँदैछ सरकार ?
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा जग्गा प्राप्ति गरेर मात्र सडकको सीमा तोक्न, विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवास सुरक्षालाई प्रतिकुल असर नपार्न र आवास क्षेत्रमा उपयुक्त विकल्प दिन भनिएको छ ।
साथै जग्गा प्राप्ति गर्दा अधिकांश वा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी बाँकी उपयोगविहीन भई विस्तापित हुने, निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजन गरेर विस्थापित हुनेहरुको पुनर्वास र पुनस्थापनको हकलाई सम्बोधन गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न भनेको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं उपत्यकामा करिब ४ सय किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ भने करिब सय किलोमिटर बाँकी नै छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले फैसला पुनरावलोनमा जान वा मुआब्जाका लागि ५० अर्बभन्दा बढी बजेट दिन माग गर्‍यो ।
यति मात्र होइन, मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सर्वोच्चको फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्दा उपत्यका बाहिरका सडक विस्तारमा पनि समस्या आउने देखिएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला र स्थानीय तहको सडक विस्तारमा समेत सरकारले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्रै जानी-जानी घरटहराहरुलाई समेत उनीहरुको मागअनुसारकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानकै लागि पनि मुआब्जा तोक्नुपर्छ । तर, विद्यमान ऐनअनुसार नापजाँच नगरी मुआब्जा तोक्न पनि मिल्दैन ।
यस्ता धेरै विषयमा विद्यामान ऐनकानुन र र सर्वोच्चको फैसला पनि बाझिएको दावी मन्त्रालयको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ । सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण हुनै सक्दैन ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सडकको ‘राइट अफ वे’मा मनोमानी बढ्ने र एउटा राजमार्ग विस्तारमै अर्बौं मुआब्जा दिनु पर्ने अवस्था आएको सरकारको दाबी छ ।
ओम अस्पतालको अध्यक्षमा उद्धव पौडेल, भोला रिजाल बाहिरिए
५५ लाख नगदसहित ८ जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ
भारतदेखि थाइल्याडसम्मको चामल नेपालमा, २९ अर्ब ३६ करोडको धान आयात,
August 8, 2018 September 2, 2018
Previous Article Open Blogger post in new window
Next Article पृथ्वीमा छैटौं महाविनाश सुरु, वैज्ञानिकले दिए यस्तो चेतावनी
Cheap Flight Ticket -सस्तो हवाई र होटेल
Your Tickets – सस्तो भन्दा सस्तो हवाई र होटेल आफै हेर्नुहोस
Air Ticket Biratnagar – Travel Agency Biratnagar
How to speed up internet connection on the phone
How to Delete Sitemap from Google Search Console
Mind Blowing Story – महिला र भिकारी को कथा
Ghar Jagga Biratnagar - Real Estate Nepal - Ghar Jagga Nepal on पुदिनाको फाइदै फाइदा जानी राखे काइदा
Job in Japan For Carpenter & Scaffolding - Baideshik Rojgari Nepal बैदेशिक रोजगारी नेपाल on पुदिनाको फाइदै फाइदा जानी राखे काइदा
How to download movies of your choice | Batika Tech Sansar on RABIN BHUJEL – NG – NEPALI MICHAEL JACKSON
Nepali Jocks - News & Tech.. on RABIN BHUJEL – NG – NEPALI MICHAEL JACKSON
यी हुन् क्यान्सरको जोखिम घटाउन ७ खानेकुरा - Batika Tech Sansar on पुदिनाको फाइदै फाइदा जानी राखे काइदा
Copyright © 2019 News & Tech...